Lix maxbuus oo Falastiiniyiin ah oo ku dhiiraday inay ka baxaan jeelka Israa'iil ee aadka loo ilaaliyo - Diblomaasi
Maxaabiistan waxay ka baxsadeen xabsiga Gilboa habbeenimadii, kaas oo loo malaynayo inuu yahay mid ka mid ah xarumaha ugu ammaanka badan Israa’iil.
Lixdaan qof ayaa ku baxsaday marinka tunnel-ka ee ka baxsan derbiyada Xabsiga Gilboa [Getty]
Lix maxbuus oo Falastiiniyiin ah, oo inta badan ku jira xabsi daa’in, ayaa subaxnimadii hore ee Isniintii ka baxsaday xabsi ammaankiisu aad u sareeyo oo ku yaal woqooyiga Israa’iil kadib markii ay qodeen god dhulka hoostiisa ka qodan.
Lixda qof ayaa ku baxsaday marinka tunnel-ka ee ka baxsan derbiyada Xabsiga Gilboa, kaas oo ay ku guuleysteen inay qoddaan dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, sida ay sheegeen saraakiisha xabsigu, iyagoo intaas ku daray in raggaasi ay qol wadaagaan.
Jebintooda xabsiga lama ogaan ilaa saacado kadib markii ay ahayd 4-ta subaxnimo, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay Adeegga Xabsiyada Israa’iil.
Xabsigu ayaa sii daayay fiidiyow u muuqda inuu muujinayo tunnel cidhiidhi ah oo laga qoday hoos.
IPS ayaa xaqiijisay in dadka baxsaday uu ku jiro Zakaria Zubeidi, oo ah hoggaamiye caan ah oo reer Falastiin ah kana soo jeeda magaalada tooshka ah ee Jenin ee Daanta Galbeed ee la haysto.
Wuxuu ahaa madaxii hore ee Guutada Shuhadada Al-Aqsa wuxuuna ahaa shaqsi caan ka dhex ahaa Falastiiniyiinta iyo Israa’iiliyiinta.
Hawlgal ballaaran oo baaritaan ah ayaa la bilaabay kaas oo ay ku lug leeyihiin booliska, ciidanka, iyo ciidamada sida gaarka ah u tababaran, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay booliska.
Eeyaha wax uriya iyo hantida hawada ayaa loo isticmaalay goobidda iyo isbaarooyinka la dhigay aagga ku xeeran.
Ciidanka ayaa sheegay in ciidamadoodu ay “diyaariyeen oo la geeyay” Daanta Galbeed oo qeyb ka ah howlgalka.
IPS ayaa isku diyaarineysa inay daad-gureyso maxaabiista ku haray, ku dhawaad ​​400 oo qof, kuna kala firdhin doonto xabsiyada kale si baaritaan loogu sameeyo baxsadka, ayaa lagu yiri bayaan.
Related Topics:kaas oo loo malaynayo inuu yahay mid ka mid ah xarumaha ugu ammaanka badan Israa'iil.Maxaabiistan waxay ka baxsadeen xabsiga Gilboa habbeenimadii
Ra’iisel wasaarihii hore ee UK Tony Blair ayaa dhaleeceeyay ‘ka tagista’ reer Galbeedka ee Afgaanistaan
Bariga dhexe8 hours ago